Xiaomi သည် ဝါယာကြိုး ကိုယ်ထည် ကုမ္ပဏီ Tongyu Automobile တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည် - Pandaily
Xiaomi သည် ဝါယာကြိုး ကိုယ်ထည် ကုမ္ပဏီ Tongyu Automobile တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်
Jun 21, 2022, 13:32ညနေ 2022/06/21 14:09:40 Pandaily
ရှန်ဟိုင်း အခြေစိုက် Tongyu Automobile သည် မကြာသေးမီက တရားဝင် စီးပွားရေး မှတ်ပုံတင် ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကိုပြောင်းလဲ ခဲ့ပြီး Hai Antarctic Wood Venture Capital (Xiaomi Affiliates) နှင့် Cowen Capital ကို အစု ရှယ်ယာရှင် များအဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရွေ့လျား မှုနှင့်အတူ,ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး သည်ယွမ် ၃၀. ၀၇ သန်း (ဒေါ်လာ ၄. ၅ သန်း) မှ ၃၂. ၂၆ သန်း (ဒေါ်လာ ၄. ၈၂ သန်း) အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။.
Tongyu Automobile ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှန်ဟိုင်း နှင့် Yichun တွင် အခြေစိုက်စခန်း နှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် ကုမ္ပဏီ သည်တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူ အများအပြား အား အသိဉာဏ်ရှိသော မောင်းနှင်မှု စနစ်များ ကိုထောက်ပံ့ပေး ပြီးနောက် မျိုးဆက် ဝါယာကြိုး ကိုယ်ထည် စနစ်များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို အာရုံစိုက်သည်။ ၎င်း၏ ထုတ်ကုန် များတွင် အဓိကအားဖြင့် wire control system, steer-by-wire system, braking energy recovery system နှင့် အဆင့်မြင့် မောင်းနှင်မှု အထောက်အကူပြု စနစ် တို့ပါ ၀ င်သည်။
၎င်း၏ အဖွဲ့သည် ပြည်တွင်း ပထမ တန်းစား လျှပ်စစ်-ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ် (EHB) ထုတ်ကုန်များကို တီထွင် ခဲ့ပြီး EHB နှင့်သက်ဆိုင်သည့် မူပိုင်ခွင့် ၄၇ ခုကို လျှောက်ထား ခဲ့ပြီး ၇ ခုမှာ တီထွင် မှု မူပိုင်ခွင့် များနှင့် ၂၆ ခုသည် မူပိုင်ခွင့် မော်ဒယ် မူပိုင်ခွင့် များဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi ကား သည် အလိုအလျောက် မောင်းနှင် ခွင့် မူပိုင်ခွင့် ရရှိ
Xiaomi သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု ကိုဆက်လက် လုပ်ကိုင် မည်ဟု ကြေငြာ ပြီး ကတည်းက ပေကျင်း အခြေစိုက် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ ကြီးသည် လုပ်ငန်းစဉ် ကိုပုံမှန် တိုးတက် အောင်လုပ် ဆော င်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် နှင့်ဆက်စပ်သော ကုမ္ပဏီ အသစ် များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုသည် lidar ကဲ့သို့သော မော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများ မှသည် ပါဝါ ဘက်ထရီ များ၊ လျှပ်စစ် စနစ် များ၊ မော်တော်ယာဉ် ချစ်ပ် များနှင့် ရောင်းအား များ အထိ စက်မှု လုပ်ငန်း၏ ဌာနခွဲ အားလုံးကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။
ဥပမာ ေျပာရရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ လကုန္ ပိုင္းက Xiaomi နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ထားတဲ့ Hanxing Ventures ကုမၸဏီဟာ KBVIP မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ပါတယ္။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူဖြစ်ပြီး စွမ်းအင် သိုလှောင် ခြင်း၊။
Holographic နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ LNGIN Technology သည် A + Round Financing ကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
Hangzhou အေျခစိုက္ Holographic နည္းပညာ ကုမၸဏီ LNGIN Technology က စုစုေပါင္း ယြမ္ သန္း ၁၀၀ နီးပါး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၉၅ သန္း) အတြက္ Round A + ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ မႈ ၿပီးစီး ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။